SHandong Weichuan metal iimveliso Co., Ltd. ibekwe ekudibaneni indlela Mudanjiang kunye Taishan Road e Liaocheng Economic Development Zone, kufuphi Ji Han Expressway emantla kunye Beijing Kowloon Railway eNtshona. Le nkampani igubungela ummandla we-200 mu, kunye nommandla wokwakha we-46700 square metres, utyalo-mali lulonke lwe-1.2 yeebhiliyoni zeeyuan, imveliso yonyaka ye-800000 yeetoni zemibhobho yentsimbi engenamthungo kunye nomthamo wentengiso wonyaka we-6 yeebhiliyoni zeeyuan. Okwangoku, inkampani ngumenzi wemibhobho yentsimbi edumileyo engenamthungo kwiPhondo laseShandong.
Ukuveliswa kombhobho wentsimbi engenamthungo kunye neprojekthi yokulungisa i-Shandong Weichuan metal products Co., Ltd. ibonakaliswe ngokwesayensi kwaye yakhiwe ngokungqongqo ngokungqongqo kwemigaqo-nkqubo yezoshishino yesizwe kunye nemigaqo-nkqubo yesizwe yokhuseleko lokusingqongileyo, kunye nezixhobo ezifanelekileyo zamkela ubugcisa obuphambili obufana nokugcinwa kwamandla kunye nokunciphisa ukusetyenziswa. . Ezona mveliso ziphambili sisingxobo se-oyile, umbhobho we-oyile, umbhobho wepropu osebenza ngoxinzelelo lwendalo, umbhobho wenqanawa yoxinzelelo, umbhobho wemoto, umbhobho womkhosi kunye nezinye iimveliso, ngethemba elibonakalayo lentengiso. Iimpawu zenkqubo yeprojekthi: okokuqala, i-Assel pipe mill yeyunithi iqhubela phambili kwaye ithembekile i-rolling mill emithathu yokusila ngoku; Okwesibini, i-mandrel yombhobho wokusila emithathu ithatha i-mandrel pre threading kunye nomjikelo omncinci omncinci, onciphisa kakhulu ixesha lokuthunga, iphucula ubomi benkonzo ye-mandrel kwaye iqinisekisa umgangatho wangaphakathi wombhobho wentsimbi; Okwesithathu, iyunithi ithatha inkqubo ye-automation system elawulwa yikhompyutheni yamanqanaba amathathu ukuze iqonde imisebenzi yokugcinwa kwepharamitha yenkqubo, ukulungiswa ngokuzenzekelayo kunye nokuxilongwa kwengozi. Itekhnoloji yemveliso, izixhobo kunye nenqanaba lokuzenzekelayo zikwinqanaba eliphambili lamazwe ngamazwe; Okwesine, iiyunithi ziyilwe kwaye zenziwa e-China ukugcina utyalo-mali kunye nokwaphula i-monopoly yetekhnoloji yexesha elide; Okwesihlanu, ivelisa ubukhulu becala imibhobho yentsimbi engenamthungo kunye nodonga olungqindilili oluphakathi, ilungele ukuveliswa kwemibhobho yentsimbi engenamthungo ephezulu, igcwalisa umsantsa kwimarike.
Ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zabathengi, inkampani ngoku inokuthengisa iimveliso zemibhobho yentsimbi engenamthungo njengeTiangang, iBaotou Steel, iBaosteel, iHengyang, iJiangyin, iXinchangjiang kunye nentsimbi yesinyithi. Izinto eziphambili zezi: 20 #, Q345B, 20g, 15CrMo (g), 12Cr1MoV (g), 42CrMo, T91, 40Cr, njl. Imigangatho yesizwe yile: GB / T8162 umbhobho wentsimbi yesakhiwo, GB / t8163 umbhobho wensimbi we-fluid, GB3087 umbhobho webhoyila woxinzelelo oluphakathi nophantsi, gb5310 umbhobho webhoyila woxinzelelo oluphezulu, gb6479 umbhobho okhethekileyo wesichumisi sekhemikhali, gb9948 petroleum yokuqhekeka umbhobho, njl. , iinxalenye zemoto, njl. Zonke iipayipi zensimbi ezisebenza yinkampani yethu zithobela imigangatho kazwelonke, kunye noluhlu lwezinto eziluhlaza zesityalo sensimbi eqhotyoshelweyo. Umthamo omkhulu uyakhethwa.
Isatifikethi seNkqubo yoMgangatho
Inkampani iphumelele "isiqinisekiso senkqubo ye-ISO9001 kunye nesatifikethi se-EU CE". Iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo egqibeleleyo emva kokuthengisa ziye zaphumelela igama lethu elihle kwaye zaphumelela indumiso yabathengi abaninzi ekhaya nakwamanye amazwe. Abathengi bethu ehlabathini lonke. Iimveliso zethu zithunyelwe eJamani, eUnited States, eMzantsi Korea, eRashiya, eMalaysia, ePakistan, eThailand, eIndiya, eTurkey, eVietnam, eCanada, eUkraine nakwamanye amazwe kunye nemimandla. Samkela ngokunyanisekileyo abahlobo abavela kwihlabathi liphela ukuba baqhagamshelane nathi kwaye baseke ubudlelwane bezoshishino oluyinzuzo ngokufanayo.
Ngamandla aqinileyo, ukucaciswa okucebileyo kunye okupheleleyo kunye neentlobo, ukuqinisekiswa komgangatho ogqibeleleyo, ixabiso elifanelekileyo kunye nenkonzo ekumgangatho ophezulu, inkampani iye yaqinisekiswa kwaye yathenjwa ngabasebenzisi abatsha nabadala kunye nabantu abakushishino. Ngokuhambelana nenkonzo yenkonzo "yokuqhagamshelana nabasebenzisi kunye nokucinga ngabasebenzisi", siyaqhubeka nokwenza iinzame kwaye siqhubela phambili. Apha, singathanda ukwenza umbulelo ongazenzisiyo kubahlobo abatsha nabakudala abavela kuzo zonke iinkalo zobomi abathe basixhasa iminyaka emininzi. Ndiyathemba ukuba intsebenziswano yethu yexesha elizayo iya kuba mnandi ngakumbi!